Hafahafa ny zava-drehetra tamin'ity taona ity, mandra-pahatongan'ilay sary famantarana Osaka 2025 | Famoronana an-tserasera
Misy koa indraindray sary famantarana sasany izay toa tsy natao hisolo tena ny World Expo Osaka 2025. Ary izao no mitranga amin'ny sary famantarana Osaka 2025 ihany izay mamela antsika somary misavoritaka rehefa manandrana mitady karazana firindrana ao.
Angamba ao anaty korontana izay mamokatra miaraka amin'ny sary famantarana izay afaka manome hafatra maro na tsy misy. Angamba ity no tianao hisolo tena an'i Osaka 2025 ho an'ny World Expo, toa an'i Seville taona maro lasa izay.
Azontsika atao ny milaza izany iray amin'ireo logo tsy fahita firy izay mbola tsy hitantsika tamin'ny tranga tahaka itony; Eny, Naranjito avy amin'ny Tompondaka Tompondaka Eran-tany dia azo antoka fa nanana izany. Na dia eto aza farafaharatsiny amin'ny lafiny endrika dia manana ny endriny maoderina izy io.
- ?? (@ XkEL7NiSXE795tS) Aogositra 26, 2020
Ary miresaka momba ny sary famantarana iray isika izay misy ny sasany endrika boribory izay mety hitovy amin'ny atody na koa voatabia iray, dia manana ny antsipirian'ny "maso" mety ho fotsy izy ireo miaraka amin'io teboka manga io koa boribory. Mahalana izany dia tsy misy fisalasalana.
Como raha misy zavatra miforona ary amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika hoe inona izany. Ny marina dia mbola misy 5 taona mandra-pankalazana an'i Osaka 2025, ka mbola betsaka ny lamba hokapaina; Mbola tsy tapitra koa ity 2020 ity.
Raha ny fantatsika dia izao ny endriny dia nofidina tamin'ny fidirana 5.984, noho izany azo antoka fa tsy maintsy notapahin'izy ireo kely ny lohany mba hisafidianana azy, na io areti-mandringana io dia misy fiantraikany amintsika rehetra nefa tsy fantantsika akory.
Ity fampirantiana ny Osaka dia manana ny tanjon'ny fiaraha-miasa manerantany mamorona fiarahamonina ahafahan'ny tsirairay manatratra ny tanjony ary maneho ny tena fahaizany. Eny, hoy aho, ho hitantsika ny fandehan'ny zava-drehetra hatramin'ny 2025, ankehitriny fa mifarana ny taona 2020 ... Raha mbola hahita an'izany isika saron-tava hafahafa nataon'i Burker King.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny sary famantarana hafahafa an'ny Expo 2025 ao Osaka any Japon